नेपाली चलचित्र रोज आजबाट देशभर प्रदर्शनमा, कस्तो छ प्रतिक्रिया ? | onlineharpal.com
नेपाली चलचित्र रोज आजबाट देशभर प्रदर्शनमा, कस्तो छ प्रतिक्रिया ?
on: २२ भाद्र २०७५, शुक्रबार २१:४० In: bignews1, मनोरन्जन
नेपाली कथानक चलचित्र रोज आजबाट देशभर प्रदर्शनमा आएको छ । प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार उक्त चलचित्रले सन्तोष जनक कमाइ गरेको छ । चलचित्र त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित छ । चर्चित नायक प्रदिप खड्काको मुख्य भूमिका रहेको उक्त चलचित्र हेरुञ्जेल बोर नलाग्ने खालको राम्रो बनेको छ । कथा बस्तु अलि लभ स्टोरी, सामाजिक, शिक्षा मुलक रहेको छ।
कथा बस्तु सलल बगेको छ । समाजमा घट्ने घटनाहरुको चरित्रलाई राम्ररी चित्रण गर्न खोजिएको छ । मुख्य नायकको भूमिका अलि असामाजिक अलि नेगेटिभ रहे पनि जिवन्त छ नेपाली समाजलाई हेर्दा यस्तो पात्रहरु र घटनाहरु महसुस गर्न सकिन्छ । समग्रमा फिल्म राम्रो मान्न सकिन्छ ।
मुख्य नायकको भूमिकामा प्रदिप खड्का रहेका छन भने नायिकाको भूमिकामा प्रतिमा राना र मेरुना मगर रहेका छन्। नायिका मेरुना मगरले नेपाली लोयरको राम्रो भूमिका निभाएकी छिन । प्रतिक्रिया बुझन तल भिडियोमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस ।